1.MR Vortex Preworkout पाउडर बिक्री मा केवल $ 29.95 को लागि
घर » A1Supplements » पूर्वकार्य सम्झौता: केवल $ 1 को लागि बिक्री मा 29.95.MR वर्ट्सेक्स
पूर्वकार्य सम्झौता: केवल $ 1 को लागि बिक्री मा 29.95.MR वर्ट्सेक्स
पूर्वकार्यक्रम: बीपीआई खेलकुद 1.MR वर्ट्टेसे बिक्री
जिमको लागि नयाँ पूर्वकार्यको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ? यदि त्यसो भए, फिटनेस रिबेट्स तपाईंको लागि ठूलो सम्झौता छ। हामी एक 1.MR वर्टसेक्स बिक्री देखि प्रस्तुत A1 पूरकहरू
1MR वर्टेक्स अब केवल $ 29.95 को लागि बिक्रीमा छ! 50% बचत गर्नुहोस् $ 59.99 खुदरा मूल्य
फ्लेवरले ब्लुबेरी नींबू आइसको फाइन पंच समावेश गर्दछ
वर्टसेक्स के हो?
1MR VORTEX पूर्व-कसरत पाउडरहरूको नयाँ विकास हो। यो जटिल र3अनन्य ब्रान्ड नयाँ अवयवहरु संग ईन्जिनियर गरिएको छ जुन तपाईंको workouts को गुणवत्ता बढावा दिन र तीव्रता गर्न सावधानीपूर्वक तयार गरिएको छ। भट्टरमार्फत, तपाईं अपरिवर्तनीय ऊर्जा, बढेको बल, र बढेको प्रदर्शनको अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ!
1.MR वर्ट्सेक्स पूरक तथ्य:
साइजिंग: 1 स्कूप (3 ग्राम)
बोतल प्रति सर्भर: 50
सर्भर प्रति रकम
Niacin (निकोटीइनिक एसिड) 20mg
पूर्ण स्पीड VORTEX मैट्रिक्स (मालिकाना) 1,705mg
ग्लिसरोल (जस्तै ग्लिसरील मास्टोस्टेरेट), इन्इगेरेरिया पल्चर (एरियल), कैफीन (कैफीन एहिड्रस), व्हाइट लिडवार्ट (जड़), सिकुरिनगा (सेकुरिनागा द्र्रुटोसिसा) (प्वाइन्ट र रुट), यहामिबी (पोसिनस्टेलिया यहाम्बे) (छाल)।
अन्य सामाग्री: साइट्रिक एसिड, प्राकृतिक र कृत्रिम जायके, Sucralose, माले एसिड, एसिसेल्फेम K, सिलिका, माल्टोडप्पाइन, एफडी र सी रातो नम्बर 40
प्रशिक्षण दिन मात्र प्रयोग गर्नुहोस्। कृपया पूर्ण रूपमा एक सोकोपोलोजीमा प्रसोधन गर्नु भन्दा ट्रोरेन्स स्तर को लागी एक सेवा (1 सोकोप) सँगै जानुहोस्। एक 1-1 मिनेट प्रशिक्षण (15 स्कूप) लगभग 30-6 मिनेट लिनुहोस्, 8-2 औँलोको चिसो पानी वा पेयमा मिश्रित, वा योग्य स्वास्थ्य हेरचाहकर्ता द्वारा सुझाए अनुसार। महत्वपूर्ण नोट (हरू):2घण्टा अवधिमा दुई (24) सर्भर (1 स्कूप्स) भन्दा बढी नगर्नुहोस्। 4MR VORTEX को उपभोग पछि एक घण्टा भित्र खाना खाएर खाना खान वा प्रोटीन हल्लाउनुहोस्। नम्रताबाट बच्नको लागि, बिस्तारको चार (1) घन्टा भित्र नलगाउनुहोस्। भोजन, वा पूर्ण पेटमा XNUMXMR VORTEX लिँदै यसले यसको प्रभाव घटाउन सक्छ।
18 उमेर भन्दा कम व्यक्तिहरूको प्रयोगको लागी इरादा छैन। सिफारिस गरिएको डोज भन्दा बढी नगर्नुहोस्। लगातार आठ भन्दा बढी (8) हप्ताको लागि नलगाउनुहोस्। यो उत्पादन गर्भवती वा ल्यापटप महिलाहरु द्वारा लिइएन। यस उत्पादनको प्रयोग गर्नु अघि एक लाइसेन्स चिकित्सकको सहमति पाउनुहोस्, विशेषगरि यदि तपाई औषधी लिइरहनुभएको छ, एक स्वास्थ्य अवस्था छ, वा गर्भवती हुन सोच्दै। बच्चाहरु लाई पुग्न को लागी यस उत्पादन र सबै आपूर्ति को पालन गर्नुहोस।
क्याफिन चेतावनी: यो उत्पादनको सिफारिस गरिएको लगभग दुई कैफीनको रूपमा दुई कप कफी हुन्छ। क्याफिन खपत नगर्नुहोस्, वा सिफिफेरिनसँग मिलाउनुहोस्, तर कफी, चिया, सोडा र अन्य आहार पूरकहरू वा फिनाइलफेरिन वा क्याफिनसँग सम्बन्धित औषधिहरूमा सीमित छैनन्। धेरै धेरै क्याफिनले घर्षण, चिन्ता, निस्क्रियता, र कहिलेकाहिँ तीव्र हृदयघातको कारण हुन सक्छ। यदि तपाईं चकलेट अनुभव गर्नुहुन्छ भने, असुविधा, कडा सिरदर्द, द्रुत हृदयघात वा सांसको कमजोरी प्रयोग गर्नुहोस्।
सावधानी: 1MR VORTEX मा बी भिटामिन निकोसिइन हुन्छ। नियासिन अस्थायी फ्लश, टिंगलिंग, छाला पुनरुत्थान, र गर्मी को संवेदनशील हुन सक्छ, विशेष गरी यदि एक खाली पेट मा लिन्छ। यो एक सामान्य प्रतिक्रिया हो।
खरिद 1.MR वर्ट्सेक्स आज A1 बाट केवल एकमात्र $ 29.95 को लागि लागू हुन्छ!
A1Supplements.com - फैट हानि आपूर्तिहरू
* 29.95.MR वर्टेक्स को लागि $ 1 को मूल्य5/2/ 143को अनुसार मान्य छ: 48 PM EST। उत्पादन मूल्यहरू र उपलब्धता संकेतित मिति / समय अनुसार र सही विषयको रूपमा हो। खरीदको समयमा A1Supplements.com मा प्रदर्शित कुनै पनि मूल्य र उपलब्धता जानकारी यस पूरक को खरीद मा लागू हुनेछ
2 सक्छ, 2014 व्यवस्थापक A1Supplements, पूर्व-कसरत, पूरक कुनै टिप्पणी छैन
26 मा 4% बचत गर्नुहोस् हाइड्रोक्सकोब्लामलाइन चरम को बोतल